सीआईटीको साढे ३ लाख कित्ता शेयर लिलामी शुक्रबारदेखि, कति होला कटअफ प्राइस ? - Aarthiknews
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले १ लाख कित्ता भन्दा बढी शेयरको लिलामी गर्ने भएको छ । हकप्रद शेयरको बिक्रीका क्रममा आवेदन माग नपरेका ३ लाख ५४ हजार १ सय ५० कित्ता शेयर लिलामी बढाबढमा बिक्री गर्न लागिएको हो ।
यो आवेदन शुक्रबारदेखि चैत २ गतेसम्म खुला हुनेछ । सो शेयरको बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन आरबीबी मर्चेन्ट र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तोकिएका शाखाबाट फर्म प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
घट्दो बजारमा कति होला कटअफ मूल्य ?
नागरिक लगानी कोषको हकप्रद शेयरका लागि २ हजार ७ सय ८४ रुपैयाँमा भएको थियो । अहिले यसको मूल्य ४ हजार ३ सय रुपैयाँको हाराहारीमा छ । मूल्य समायाजनपछि मात्रै यसको मूल्य ४ हजार ७ सय ९९ रुपैयाँ पुगिसकेको थियो ।
अहिले बजार घट्दो अवस्थामा छ । बजार घटे्दै जाँदा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर हुने भएकोले कटअफ मूल्य वास्तविक मूल्य भन्दा धेरै तल हुनजान्छ । त्यसैले विवेकशील लगानीकर्तालाई बजार गिरावटको फाइदा लिनसक्ने अवस्था देखिन्छ ।
विगतमा घट्दो बजारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य घटेर गरिएको आवेदनले पनि मूल्य पाएको इतिहास छ । यद्यपि केही दिनदेखि घटेको बजारले यो महिनाको अन्त्यसम्म कस्तो गति लेला भन्ने आधारमा मूल्य निर्धारण हुन सक्छ ।
नागरिक लगानी कोषले यो वर्षको लाभांश घोषणा गरेको छैन । हकप्रद शेयर किन्नेले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लाभांश समेत पाउँनेछन् ।